विप्लव विचार हो, थुनेर थुनिन्छ ?
यतिबेला विप्लव नेकपा सरकारको तारो बनेको छ । विप्लवका प्रवक्ता प्रकाण्ड समातिए, विप्लवका अरु नेता र कार्यकर्ताहरु पनि धमाधम समात्दै जेल हाल्दै गरिएको छ । विप्लव माओवादीमाथि बन्द आह्वान गरेको, ७ करोड चन्दा उठाएको, वम र आगजनी गरेको आरोप लगाइएको छ । स्मरणीय छ, यो सरकार पनि त्यही कर्म गरेर जन्मेको हो । यिनको विगत पनि रगतपच्छे छ ।
प्रश्न उठेको छ भने विप्लवले चन्दा उठाए भनेर पक्राउ गरियो । राजस्वमारा एनसेललाई किन पक्राउ गरिएन ? अरु बिग हाउसहरु जसले राज्यलाई ठगी गरेका छन्, तिर्नुपर्ने कर छुट पाएका छन्, छुट दिनेले दिइरहेको छ भने तिनलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्ने ? मान्छे मार्ने, हत्या बलात्कारदेखि ठग्ने, भूमाफियादेखि तस्करी गर्नेहरु, भ्रष्ट तत्वहरु सरकारका ज्वाईँ हुन् कि जेठान ? तिनीहरुलाई पक्राउ गर्न नसक्नेसँग विप्लव माओवादीलाई पक्राउ गर्ने नैतिक बल कसले कहाँबाट ल्याएर दियो ? ओली सरकारले यत्ति पनि बुझेन कि विप्लव माओवादी विचार हो, विचारलाई पक्रेर थुनेर कति दिन थुनिरहन सकिएला ?
विप्लवजसरी नै निस्कनेछन् हिन्दुराष्ट्र चाहियो भन्नेहरु । राजसंस्था चाहिन्छ चाहिन्छ, भन्नेहरु पनि सडकमा आउनेछन् । के ती सबैलाई यसैगरी पक्रेर थुन्ने ? थुनेर समस्याको समाधान निस्कन्छ ? ती सबै राजनीतिक शक्ति हुन्, विचार हुन्, आस्था र विश्वास हुन् । राजनीतिक शक्तिसँग प्रहरीको व्यवहार गर्नु ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भइरहेको छ । राजनीतिक शक्तिसँग त राजनीतिक रुपमा कुरा गर्नुपर्छ । सहमति र सहकार्यको सूत्र पत्ता लगाएर अघि बढ्नु उचित हुनेछ । जनताले चुनाव जिताएको अर्थ यो होइन कि जथाभावी गोली हान, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर, विपक्षीलाई धमाधम पक्राउ गरेर थुन ।
विचार थुनेर थुनिन्न । राजनीतिक शक्तिलाई परास्त गर्न राजनीतिक औजार प्रयोग गर्नुपर्छ । राजनीतिज्ञ हौ भने प्रधानमन्त्री ती शक्तिहरुसँग वैचारिक रुपमा मुकाविला गर, तिनलाई बुझाउ या तिनको कुरा बुझ । निकास निस्कन्छ ।